Saddex sababood oo ku qasbi karta Alexis Sanchez inuu go’aansado ku biirista kooxda PSG – Gool FM
Saddex sababood oo ku qasbi karta Alexis Sanchez inuu go’aansado ku biirista kooxda PSG
(Manchester) 10 Nof 2018. Sida laga soo xigtay wargeyska “The Times” ee dalka England Alexis Sanchez ayaa ku fikiraya inuu ka dhaqaaqo kooxda Manchester United, kadib mudo ka yar sanad uu u soo wareegay garoonka Old Traford.
Alexis Sanchez ayaa kaga soo biiray Red Devils kooxda reer London ee Arsenal suuqa bishii Janaayo ee lasoo dhaafay, balse wuxuu ku guuldareestay inuu xasalooni ku dareemo qorshaha tababare Jose Mourinho.
Hada laacibka reer Chile ee Alexis Sanchez ayaa lagu soo waramayaa inuu haatan qorsheenayo inuu kaga dhaqaaqo garoonka Old Traford saddex sababood si uu ugu biiro Paris Saint-Germain.
29 jirkaan ayaa awoodi waayay inuu qaab ciyaareedkiisii kooxda Arsenal oo kale uu ku qaato kooxdiisa haatan ee Manchester United, kadib markii uu 4 gool oo kaliya uu ku dhaliyay 28 gool.
– Si kastaba waxaa la fahamsan yahay in mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee ka danbeeya waxa uu haatan dareemayo Alexis Sanchez ay tahay in ugu horeyn uusan awoodin in uu daganaan ku dareemo Manchester United, waana sababta ka dhigi karta inuu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain.
– Arinta kale ayaa ah in Sanchez uusan xiriir wanaagsan la lahayn saaxiibadiis kula sugan kooxda Manchester United, marka laga reebo xidigaha David de Gea, Juan Mata iyo Romelu Lukaku, waxaana loo maleynayaa in Sanchez ay tahay wax yar inta uu la sheekeysto saaxiibadiis.
– Arinta Saddexaad ayaa ah inuusan ku qancin qorsho ciyaareedka tababare Jose Mourinho, Inkastoo Sanchez uu ixtiraamo Tababaraha reer Portugal, hadana kuma qanacsana wareysiyada uu ku bixiyo saxaafada, xili uu ka filayay in garab istaag xoogan uu ka heli doono.
Dybala oo kashifay wixii dhex maray isaga iyo Jose Mourinho!!!